काठमाडौं – समाजसेवी ज्योति घिमिरेले राजधानीको गोकर्ण स्थिति संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रमा रहेको अनाथ बालबालिकाबीच विहिवार आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छन् । उनले केन्द्रमा रहेका बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग, खाद्यान्न सामग्री, शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्दै खाना खुबाएर आफ्नो जन्मदिन मनाएकी हुन् । साथै उनले बालबालिकाहरु संगै केक काटेर खुसियाली साटासाट गरेकी थिइन्।
संस्थाका अध्यक्ष तिल बहादुर कार्कीले संस्थामा ५२ बालबालिका रहेको र आफूहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुको सहयोगमा उनीहरूको पालन पोषणा तथा शिक्षा दिक्षा प्रदान गरिरहेको उक्त अवसरमा बताए । समाजसेवी ज्योति घिमिरेले जन्मदिनको अवसरमा साथिभाईसँग रमाइलो, पार्टी भन्दा पनि संस्थाका बालबालिकासँग जन्मदिन मनाउँदा आफूले छुट्टै प्रकारको सुखानुभुती महसुस गरेको बताइन । ‘मैले बर्षै पिछे यसरिनै जन्मदिन मनाउदै आएको छु, यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएकी हुँ’, उनले भनिन् ।
ज्योतिले स्थानीय नेता, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी र कलाकारहरुका साथमा जन्मदिन मनाएकी थिइन । उपस्थितहरूले समाजसेवी ज्योतिले जन्मदिनमा गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका थिए । ज्योति समाजसेवाको माध्यम बाट विभिन्न राष्ट्रिय सम्मान समेत पाउन सफल भएकी एक सुपरिचित नाम हो, महिला ससक्तिकरण, स्वरोजगार, आत्माविश्वासलाइ ससक्त रुपमा अगाडि बढाउदै आएकी उनि एक निडर तथा सामाजिक अभियन्ताको रुपमा परिचित छिन।
सदावहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको आज जन्मदिन ,कति वर्ष पुगिन ?
विष्णु माझी बारे यस्तो खुलासा ज्योति मगरले गरिन् , विष्णु बाहिर नदेखिनुमा रहेछ यो कारण (भिडियोहेर्नुस्)
प्रकाश सपुतले लेखेको कबिता सुनेर ज्योति मगर किन यति धेरै रोइन्? (हेर्नुस् भिडियो)
श्री अमर ज्योति जनता माध्यमिक विद्यालमा अखिल (क्रान्तिकारी)को समिति विस्तार गरिएको छ
वसन्त विश्वकर्माको ‘रेलीमै’ सार्बजनिक (भिडियो सहित)